Odontoma (သွားအကျိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Odontoma (သွားအကျိတ်)
Odontoma (သွားအကျိတ်) ကဘာလဲ။
ပါးစပ်အတွင်းမှာပေါက်တဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အကျိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖြစ်လာမယ့်တစ်ရှူးအနည်းငယ်သို့အားလုံးကနေ ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ရှူးတွေက သွားတစ်ချောင်းပုံစံဖြစ်အောင် စီစဉ်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိသလို မစီစဉ်နိုင်တော့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ သွားကြွေလွှာ၊ အောက်ခံတစ်ရှူးတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒြပ်ထုကြီးက ပုံမှန်ဆိုလျှင် သွားနှင့် တပြေးညီကြီးထွားနေပါတယ်။ သို့သော် ၎င်း ဒြပ်ထုကြီးအစီအစဉ်မကျတော့ပဲ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဦးတည်ကြီးစိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
Odontoma (သွားအကျိတ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Odontoma (သွားအကျိတ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွားအကျိတ် ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
Odontoma (သွားအကျိတ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွားအကျိတ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာ တိတိကျကျသိတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိပါ။ သို့သော် တချို့ကတော့ သွားအကျိတ်ဟာရောဂါပိုးဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လဲ တချို့ သွားဆရာဝန်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဥပမာ သွားအကျိတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Gardener Syndrome ( ဥယဉ်မှူးရောဂါစု ) ဆိုတဲ့ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါစုက သွားအကျိတ်အပါအဝင် ခန္ဓါကိုယ်နေရာအနှံ့မှာ အကျိတ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Odontoma (သွားအကျိတ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွားအကျိတ် ဖြစ်ပွားစေနိုင်ချေကို မြင့်စေသည့်အရာမရှိဟု သိရှိရပါတယ်။
Odontoma (သွားအကျိတ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွားအကျိတ်ဟာ အပြင်ပိုင်းလက္ခဏာပြလေ့မရှိပါဘူး။ သွားအကျိတ်ကို သွားဆရာဝန်ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်မှတွေ့ရပါတယ်။ပေါက်တာနောက်ကျနေတဲ့သွား သို့မဟုတ် သွားမရှိခြင်းကိုနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
သွားမှာပေါက်နေတဲ့ အကျိတ်ကို ဘာမှမလုပ်ခင် ဘယ်လိုအကျိတ်အမျိုးအစားလဲဆိုတာ သိအောင် အရင်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ရပါမယ်။ ထို့ပြင် နှူတ်ယူထားတဲ့ တစ်ရှူးရဲ့ အနုစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကလဲ အသုံးဝင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်အဆင့်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှူတဲ့ အခါမှာတော့ တချို့သော သွားကြွေလွှာ၊အောက်ခံတစ်ရှူးတွေက သွားပုံစံပေါက်နေတာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လျှင် သွားနှင့် ဆင်တူတဲ့ အစိုင်အခဲအတုံးလေးတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကျိတ်ရဲ့ မာတဲ့နေရာကနေ လွယ်လွယ်ခွဲထုတ်လို့ရတာကြောင့် တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ အကျိတ်တွေနဲ့ ကွဲပြားစေပါတယ်။ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ သွားအကျိတ်ကကျတော့ တိကျတဲ့ ပုံစံမရှိပါ။ သွားပုံစံလဲပေါက်နေခြင်းမရှိပါ။ ဆဲလ်အဆင့်မှာတော့ ၎င်းကပြွန်ပုံစံသွားအောက်ခံတစ်ရှူးအနေနဲ့ရှိနေပြီး အခေါင်းပေါက်နေရာလေးတွေကို ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒီအဝိုင်းပုံစံနေရာလွတ်လေးတွေက အနည်ထိုင်သွားပေမယ့် တစ်ချိန်က သွားကြွေထည်လေးတွေကိုထိန်းထားပေးခဲ့ပါတယ်။ အစွန်ဖျားတွေမှာတော့ သွားအမြစ်တွေကိုဖုံးပေးတဲ့ ဆဲလ်အလွှာလေးတွေကို အဖုံးလေးတွေကဲ့သို့ဒြပ်ထုကို ဝန်းရံလျက်တွေ့ရှိရပါတယ်။
CT scan (ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်) ရိုက်ကြည့်ခြင်းကလဲ သွားဆရာဝန်တွေအတွက် သွားအကျိတ်တွေကို ကောင်းစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ တခါတရံမှာ သွားအကျိတ်က နှာခေါင်းပေါက်အတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားတတ်ပြီး ဓါတ်မှန်အပြင် အထူးကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ MRI လို့ခေါ်တဲ့ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းက သွားအကျိတ်ကိုပြီးပြည့်စုံစွာလေ့လာအတည်ပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Odontoma (သွား ကျိတ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွားအကျိတ်ကို ကုသနိုင်တဲ့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ ခွဲစိတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စောစောစီးစီးသိရှိပြီး ခွဲစိတ်ကုသလိုက်တာက လူနာအတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်ပဲ သာမာန်တစ်ရှူးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် ရိုးရိုးသွားနှုတ်သကဲ့သို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြန်လဲ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့သွားအကျိတ်တွေကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေတာကောင်းပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သွားအကျိတ် ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
သွားအကျိတ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးဟူ၍ မရှိသေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 12, 2019
Odontoma. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/odontoma. Accessed December 2, 2016.
Odontoma. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996496/ . Accessed December 2, 2016
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကလေးမွေးဖွားခြင်း
Premature Birth (ကလေးစောမွေးခြင်း)
Premature Ventricular Contractions (သွေးလွှတ်ခန်းကြောင့် နှလုံးခုန်စောခြင်း)
Polycythemia Vera (ပိုလီစိုက်သီးမီးရား ဗီရာ)
Polymyalgia rheumatica (ပိုလီမိုင်ရယ်လ်ဂျီးရား ရုမတစ်ကာ)